aaladaha kale ee quruxda Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Shiinaha qalabka kale ee quruxda Soo-saareyaasha
MURAN Vacuum qalabka mashiinka ka saarida madoow ee qalinka microdermabrasion maqaarka maqaarka oo adkeeya qalabka nuugista
Kani waa mashiin nuugid badan oo shaqeynaya kaas oo nuugi kara madaxa, finanka, caarada, wasakhda wejiga iyo nadiifinta maqaarka wajiga ayaa kaa caawin kara inaad maqaarkaaga u ahaato mid jilicsan, ka da 'yar oo firfircoon. Ma waxaad dooneysaa inaad noqotid wax soo jiidasho badan? Mid hel, mucjisooyinka ayaa si muuqata u soo muuqan doona dhowr maalmood ka dib isticmaalka. Madow yar ayaa soo bixi doona haddii aad ku adkaysato adeegsiga. Tilmaamaha & Waxqabadka: - Badeecaddu waa mid hal-ku-dhagan oo naqshadeysan si ay ula jaanqaado ergonomics-ka si fudud loo qabto. - Saddex heer si loo daboolo baahiyaha di ...
Xaraashka Daryeelka Maqaarka Gaarka ah ee Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Qalabka Madadaalada Madadaalada
Hawlaha: 1. Ka saar Madow, si qoto dheer u nadiifi wajiga madoobaatada faaruqinta madoobaadka madoobaadka 2. Wixii finanka ah, daaweynta maqaarka fin ah 3. Daaweynta maqaarka jilicsan iyo duuduubka, Dib u soo kabashada maqaarka 4. Daaweynta maqaarka iyo maqaarka maqaarka ah, yaree maqaarka maqaarka Magaca Magaca Badeecada faaruqa madoobaadaha MAYA MAYA MC003 Magaca Magaca: OEM / ODM Waxyaabaha: ABS & Daaweynta Cudurka Daweynta finanka, Madaxa Madoobaadka, Nadiifiyaha daloolada, Pore Shrinkin oo USB ku dallacaya Biyaha ...
Tijaabiye Titanium ZGTS Derma Roller 192 cirbadood oo loogu talagalay Daryeelka wajiga iyo Daaweynta-luminta Daaweynta Shahaadada CE ee la caddeeyey
Muxuu dermaroller kuu samayn karaa?
1.Warbixinta duudduuban, ka-goynta finan-ka, hagaajinta nabarrada, dib-u-cusbooneysiinta
2. Diirada cidhiidhiga ah ee goobta (glabellum, duuduub, nabar)
3.Waxaa daloola daloolada
5.Kordhi laalaabka duudduuban iyo ganaaxyada
6.Daaweynta nabarrada finanka iyo nabarrada bogsada
8.dermaroller wuxuu waxtar badan u leeyahay noocyada daaweynta daryeelka maqaarka.
Qalabka madadaalada madow ee dhuxusha ku shaqeeya ee qalabka korontada lagu nadiifiyo wajiga qalabka nuugista qalabka nadiifinta
Ma ogtahay sababta keentay sameynta madax-madoobaadka? Sababta samaynta Blackhead: nadiifku ma dhammaystirmo, godad daloola, is haysta, culeys, geeska horny, dheef-shiid kiimikaad liita. Daloolada googo'ay ee googo'ay, madax madoobaa ayaa soo muuqda. Daloolada waxay u muuqdaan finan madow ama acicular ah oo ku jira caddaanka beige, mararka qaarkood finanka u soo baxa. Magaca Badeecada Qalabka korontada yar ee dhuxusha wax lagu nadiifiyo oo faaruq ah qalab dib loo soo buuxin karo oo waji nadiif ah qalab nuugid Qalabka MAYA MAYA MC001 Magaca Magaca: OEM / ODM Waxyaabaha: ABS & Caaga Fea ...
Ugu kulul cirbadda maqaarka maqaarka maqaarka540 cirbadaha dermarollermicroneedletitanium irbadda micro
Waa maxay rullaluistemadka derma?
Dermaroller waxay isticmaashaa ul jilicsan oo lagu dhejiyay lambarro cirbado ah, oo lagu darayo dareeraha nafaqada leh ee shaqeynaya, oo si joogto ah ugu rogaya meelaha loo baahan yahay in lagu daaweeyo.Waxay ku daali kartaa in ka badan 300,000 oo maraakiib yaryar ah epidermis muddo shan daqiiqo gudahood ah, sameynta nidaam gaarsiin nafaqo leh oo u dhexeeya Dareenka nafaqada wuxuu u geli karaa maqaarka si wax ku ool ah.Sidaas darteed saameynta daryeelka maqaarku waxay noqoneysaa mid kaamil ah.
Daaweynta irbadaha yar-yar ayaa waxtar leh, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo: hoos u dhig nabarrada finanka, yareynta duuduubka iyo khadadka ganaaxa, waxay hagaajineysaa muuqaalka calaamadaha fiditaanka, Nabaro baraf ah iyo nabarrada busbuska, dib u soo cusbooneysiinta maqaarka iyo da'da gabowga Da'da & Waxyeelada Qorraxda.
Rose Gold Silver Comedone Extractor Nabar Pin Pin Qalabka Blackhead Finanka Ka-saarista Cirbadaha Madoow Madoow Meelo Nadiif Ah
Cirbadda Cirbadda Finanka “Acne Remover irbad” waa aalad qurux badan, oo ka samaysan bir bir ah oo aan lahayn bir bir ah.
Cirbadda Nabarrada Finanka finanka leh waxay leedahay hal dhinac oo wareegsan iyo mid gees leh. Ku habboon adiga si aad u soo saarto finanka ama xaydha.
Isticmaal qubeys diiran ama qubays ka dib ama uumiga wejiga ka dib marka maqaarku jilicsan yahay oo daloolada ay furan yihiin.
Haddii loo baahdo, isticmaal cirbadda oo si taxaddar leh u qaad dusha sare ee maqaarka haddii dalooladaadu aysan qaan gaarin.
Yaree dhaawaca maqaarkaaga